Xasan Sheekh oo war kasoo saarey kulanka Fahad Yaasiin | Keydmedia
Xasan Sheekh oo war kasoo saarey kulanka Fahad Yaasiin
Sida Keymedia Online fahansan tahay, Xasan Sheekh ayaa lagala tashaday qofka ku haboon ee looo magacaabi karo xilka Ra'iisul Wasaaraha, kaasoo suurta-gal yahay in Madasha dhexdeeda kasoo baxo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa aad loo hadal-hayay tan iyo Shalay Kulan dhif iyo naadir ah oo Fahad Yaasiin, Taliyaha NISA Muqdisho kula yeeshay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh oo kamid ah hogaamiyaasha Madasha Xisbiyadda Qaran.
Labada dhinac midkoodna si dhab ah ugama warramin waxyaabaha ay kawada hadleen, Fahad warkiisaba daa oo laguma baran inuu Saxaafadda la hadlo ama Sawir laga qaado markii qof la kulmayo, laakiin Xasan Sheekh ayaa qoraal kooban ku sheegay in arrimaha siyaasadeed aaney isla soo qaadin.
Xasan Sheekh: Kulankii aniga iyo Fahad Yasiin nagu dhaxmaray hooygeyga shalay ma ahayn kulan siyaasadeed. Wax ajende siyaasadeed ah oo aan ka wada hadalnay ma jirin. Wuxuu ahaa booqasho salaan ah. Maadaam aan oday Soomaaliyeed ahayna qof kasta oo soo gasho gurigeyga waa la xusmeynaa mar kasta.
Guuxa dadweynaha ayaa ah in Xasan Sheekh iyo Saaxiibadiisa lagu qancinayo inay taageeraan Farmaajo qorshihiisa mudo-korarsiga, iyagoo taasi bedelkeeda la siinayo xilka Ra'iisul wasaaraha oo qof Madasha Xisbiyada katirsan loo magacaabayo.
Sababta Farmaajo u daahiyay magacaabista, ayaa la sheegay inay ka timid Fahad Yaasiin oo raadinayo qof Guul-wade ah, oo ka shaqeeyay ololaha Doorashadda Madaxweynaha, wuxuuna iska ilaalinayaa Ra'iisul Wasaare ajandihiisa kahor imaan kara.